မောငျ(စှယျစုံကမျြး): June 2013
တွေ့ ချင်ကြားချင်စိတ်နဲ့ 
အပိုမထင်နဲ့(စာဖတ်သူ)…
"အမေ "ဟဲ" မှ…
ချစ်ရသူရယ်……… လို့ 
ချို့ တဲ့… တဲ့ငါ့ကမ္ဘာ
မင်းကို ချစ်တဲ့ စိတ်ကြောင့်ပါ……
စိတ္တဇ အတွေးနဲ့ ……
Author Anonymous at 1:22:00 PM0မှတ်ချက်
လက်ချိုးရေလို့……
"အပ်" အဖျားလေးနဲ့ပေါက်သလို
နှစ်| လ| ရက်နဲ့ ……
RM နှစ်သောင်း(RM 20,000)
"အလွမ်းညတွေ ကုန်လွန်ချင်ပီ" ။
သိုက်ကြီး (ကျောက်ပန်းတောင်း) kpgtheik@gmail.com
အဝေးရောက်အစ်ကိုတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆိုမှု့ အရ ထပ်တူကျတဲ့
ကျနော်တို့ ဘဝတွေ အလွမ်းတွေပြေပါစေလေ………
Author Anonymous at 12:55:00 PM0မှတ်ချက်
Malayia vs singapore…မှာ
ငါတို့ ရှာကြစို့ လား
ငါ့တို့ က လူသားတွေလေ
Author Anonymous at 6:49:00 PM0မှတ်ချက်
Author Anonymous at 6:34:00 PM0မှတ်ချက်
popa သို့ လွမ်းခြင်း.....
နီးရာ ကင်မရာ camera...
ဒို့ popaမြေရဲ့ အထာလေ
ရင်ဝယ်ဆို့ လို့ 
Author Anonymous at 8:05:00 PM0မှတ်ချက်
ဓာတ်ပုံတွေကို ဘောင်လှလှ ဒီဇိုင်းလှလှ အလွယ်ပြုလုပ်ပေးမယ့်ဆော့ဝဲ
Download - PictureFrame Wizard v2.0b63.exe
Author Anonymous at 6:52:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: ဓာတ်ပုံ ပြင်ဖို့Frame ဒီဇိုင်းများ
Android ဖုန်းအတွက် Battery Saver Du+Switch Widget v2.2.5.pro
Download - Battery Saver Du+Switch Widget v2.2.5.pro
Author Anonymous at 8:24:00 PM 1 မှတ်ချက်
မင်းနဲ့ ဒို့ ဟာ…
Author Anonymous at 2:38:00 PM0မှတ်ချက်
Author Anonymous at 5:22:00 PM3မှတ်ချက်
Call Recorder Galaxy S2/S3/S4 v1.9.45 Apk (5.33 Mb)
S2/S3/S4 အတွက် အထူးလုပ်တဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
တော်တော်ကောင်းတဲ့ Call Recorder ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Download>>>mirrorupload (or).zippyshare (or)sendspace
Author Free Firmware And Tools at 11:42:00 PM0မှတ်ချက်
Blog ၀က်ဆိုဒ်တွေမှာ Link တစ်ခုခုကိုနှိပ်ရင် စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုပွင်ဖို့ 
ဘလော့ဂါတွေအနေနဲ့ ပြင်မယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်မှာနှိပ်ဝင်လိုက်ပါ
နားလည်းပီးသားဆို Setting = Template - Edit Template ကနေသွားပါ
အထဲရောက်ရင် Ctrl နဲ့F ကိုတွဲနှိပ်ပြီး <head> ကိုထည့်ပီး Enter နှိပ်
တွေပြီဆိုရင် အရောင်တစ်ခုခုနဲ့ကိုယ်ရှာတဲ့ဟာကို ပြပါလိမ့်မယ်
<head> အောက်မှာ အခုပေးတဲ့စာလေးကို ကော်ပီယူထည့်လိုက်
အဲ့လိုထည့်လိုက်ပီးရင် Save Template နှိပ်လိုက်ရပါပြီ
ဒါဆိုရင် လင့်တွေကိုနှိပ်တဲ့အခါ မူလလင့်မပျက်ပဲစာမျက်နှာအသစ်ပွင်ပီ
အသုံးလိုနေသူ မေးလာလို့ မသိသေးသူများ လုပ်ကြည့်ဖို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်
Author Anonymous at 9:14:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: ဘလော့ ပြဿနာများ, ဘလော့အလှဆင်နည်းနဲ့wedgets
Android ဖုန်းအတွက် ယခုလထွက်လာတဲ့ Frozen မြန်မာကီးဘုတ် 0.5.3
Download - frozenkb.pro-16-v0.5.3.apk
Author Anonymous at 8:15:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Phone အတွက်မြန်မာဖောင့်
Android ဖုန်းအတွက်ယခုလ 4ရက်နေ့ထွက် AVG Anti- Virus ဆော့ဝဲ
ဒီဟာလေးတွေကတော့ မိမိတို့ ဖုန်းအတွက် သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေပါ
အင်တာနက်သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျုတာနဲ့ ချိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်နိုင်တဲ့အခြေနေက
အများကြီးပါ အဲ့တော့ လိုရမယ်ရ တစ်ခုခုထည့်ထားသင့်တယ် အခုလက်သုံးတာက
AVG ပါ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ၊အကြိုက်ချင်းမတူနိုင်သလို အတွေ့ အကြုံက
ကွဲပြားနေမှာပဲ အဆင်ပြေရာ ရွေးချယ်သုံးနိုင်ပါတယ် ။
Download - AVGantivirus-180265-v3.2.3.apk
Author Anonymous at 7:44:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Phone အတွက် Anti Virus
Android ဖုန်းအတွက် Battery Saver DX+Switch Widget v2.0.5.pro Version
Download - Battery Saver DX+Switch Widget v2.0.5.pro
မူရင်းလင့် - http://www.data-apk.com/2012/12/battery-saver
Author Anonymous at 3:23:00 PM0မှတ်ချက်
Android ဖုန်းအတွက် အရမ်းလှတဲ့ ပုံအရှင် Wallpaper အလန်းဇယား
Download - Firefly Live Wallpaper.apk
ိDownload -Autumn live wallpaper.apk
Author Anonymous at 2:15:00 PM0မှတ်ချက်
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူမရတာရှိသူများ ဒီနည်းလေးသုံးကြည့်
Mediafire ၀က်ဆိုဒ်မှာတင်တာတွေကို ဒီအဆင့်ပြနေရင် ဒေါင်းလုပ်မတတ်
နားမလည်သူတွေ ရှိနေပါသေးတယ် ပုံကစာကိုဖတ်လိုက်ရင် နားလည်ပြီ
ဒေါင်းလုပ် အယူများနေတဲ့ လင့်တွေမှာ အဲ့မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ် သေချာ
ဂရုစိုက်ဖတ်ပြီးတော့ လုပ်ရင်လည်း အဆင့် 1 -2ပြနေပါတယ်. OK
Author Anonymous at 7:43:00 PM0မှတ်ချက်
ညီမလေးတစ်ယောက် မှ အားလုံးသို့ ...
ကျောင်းဝတ်စုံ ဂါဝန်ဖြူစိမ်းနဲ့ 
လိပ်စာနဲ့ တကွ မန္တလေးက
သူ့ ရဲ့မျက်နှာ....... မြင်ရချိန်မှာ
ကျောင်းဝတ်စုံ ညစ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ 
လူတွေမြင်ရင်..... "၀ယ်ပါဦးရှင်" ဆိုတဲ့
မျက်နှာထားလေးနဲ့သနပ်ခါးလေးက
ချမ်းအေးတဲ့... မန္တလေးရဲ့
ပန်းတွေက..... သူ့ ဝမ်းစာပေါ့။
အတန်းဝင်ရင် မလန်းရွှင်တဲ့သူ့ မျက်နှာ
ညစ်ထေးထေးနဲ့ဂါဝန်လေးမှာ....
ငေးမှိုင်လို့ ...... စာရောလိုက်နိုင်ပါ့မလားနော်.....။
ဘယ်လိုအားအင်မျိုးနဲ့အနားကိုတိုးလို့ အားကိုယ်းရဲမလဲ????
သူကလူဆင်းရဲလေးကိုးးးး ကျူရှင်ကြေးဟာ မတတ်နိုင်တာ
တွေးရင်းနဲ့ ....... မျက်ရည် ရွှဲလာတယ်.........။
တိုင်းပြည်ကြီးက.... ဒီကလေးမနဲ့ 
အရွယ်နဲ့ မမျှ...... ညီမအရွယ်ကလေးငယ်နဲ့ 
လမ်းဘေးစင်္ကြန် တံတွေ အထွေးခံ
သမ္မတကြီးနဲ့ တကွ သက်ဆိုင်ရာက
"စာနာကြလို "့...... " မူလတန်းဘ၀"
"ဘသိန်းစိန်" ထံ "တောင်းပန်ရိုကျိုး"
"ရှိခိုးလို့ ဆုတောင်း "လိုက်ပါသည်။
ဒီကဗျာရဖို့ ..... ပုံနဲ့ တကွတွေမြင်ရလို့ 
တစ်နှစ်စာကျောင်းစရိတ် ချိတ်ပိတ်ပေးဖို့ 
ကျောင်းအုပ်ကြီးသို့သက်သေတည်လို့ 
ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ FB မှာပြမည်
Author Anonymous at 7:28:00 PM0မှတ်ချက်
Android ဖုန်အတွက် ပဲနှမ်းစပါး တွက်ချက်ဖို့ Myanmar Unitconverter
ဤ mobile app သည် http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_units_of_measurement
ကို အခြေခံထား၍ offline ဖြင့် အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုရန်၊ တွက်ချက်ရန်၊
အသုံးပြုနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ version တွင် အောက်ပါ အမျိုးအစား (၄)မျိုး ပါရှိပါသည်။
(၄) Money - ငွေကြေး
Download - mmunitconverter-3-v1.3.apk
Author Anonymous at 1:51:00 PM0မှတ်ချက်
MmYear100 သည် Androidphone များ နှင့် tablet များတွင် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်သော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်တစ်ရာပြက္ခဒိန် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း မှီတင်း နေထိုင်ကြကုန်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများသာမက၊ ပြည်ပတွင် ပညာသင်နေသူများ၊ အလုပ်လုပ်နေသူများနှင့် အခြေချ နေထိုင်ကြနေသော မြန်မာနိုင်ငံသူ/သားများတို့အတွက်အင်မတန် လွယ်ကူ၍ အသုံးဝင်သော မြန်မာ ပြက္ခဒိန် application ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများ၏တောင်းဆိုချက်နှင့် အားပေးမှုများကြောင့် လွန်ခဲ့သော ၂၄ မေလ (ကဆုန်လပြည့်) တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်၍ လှပသော MmYear100 2.0 ကို ထပ်မံ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
မြန်မာ Android ဖုန်းလောကတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် အနှစ်သက်ဆုံး နှစ်တစ်ရာ ပြက္ခဒိန် ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်နှစ် ၁၉၀၁ မှ၂၀၁၆ ထိ ပါဝင်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်နှင့် မြန်မာ သက္ကရာဇ် နှစ်မျိုးစလုံး ပါဝင်သည်။ မြန်မာစာသွင်းထားရန် မလိုဘဲ ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုရန်မလိုအပ်သည့်ပြင်၊ စာလုံး အကြီးအသေးကို ညှိနိုင်ခြင်းကြောင့် အလွန်အဆင်ပြေသည်။ မွေးနေ့ရှာလိုသူများ အင်္ဂလိပ်လို ဖြစ်စေ၊ မြန်မာလို ဖြစ်စေ အလွယ်တကူ အမြန်ဆုံး ရှာဖွေနိုင်သည်။ချစ်သူများအတွက် စိတ်တိုင်းကျ ပုံများကို နောက်ခံထား၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက်မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင် ရုံးပိတ်ရက်များကို အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်ပြီး၊ ဥပုတ်သီလ စောင့်တည်လိုသူများအတွက်လပြည့်၊ လကွယ်ကို ကြည့်ရှူ့ရန် အရှင်းလင်းဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။
Download - mmyear100-2-v2.0.apk
Author Anonymous at 9:42:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Phone အတွက် မြန်မာပြက္ခဒိန်
Android ဖုန်းအတွက် မြန်မာလို့ အပေါင်းအနုတ် ဂဏန်းပေါင်းစက်
Download - .မြန်မာအင်္ဂလိပ်ဂဏန်းပေါင်းစက်.apk
Author Anonymous at 9:03:00 PM 1 မှတ်ချက်
မင်္ဂလာပါ.. မိမိ ကွန်ပျူတာကနေ အလွယ်ကူဆုံး WiFi ပြန်လွှင့်ချင်သူများအတွက် ဖိုင်ဆိုက်အသေးဆုံး (116KB) နဲ့ လိုင်စင်အတွက် စိတ်မညစ်ရပဲ အမြဲအသုံးပြုနိုင်မယ့် VirtualRouterPlus 2.3.0 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Download မှရလာတဲ့ VirtualRouterPlus 2.3.0 Folder လေးကို Local Disk C အောက်မှာ ထည့်ထားပြီး Folder ထဲမှ VirtualRouterPlus Icon လေးကို Right Click >>> Send To >>> Desktop လုပ်ပြီး ဖွင့် မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ Password ထည့်ပြီး WiFi ပြန်လွှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်...
Download>>>>Direct Download (or)dropbox(or)zippyshare
Author Free Firmware And Tools at 6:20:00 PM 1 မှတ်ချက်
Labels: Phone မှ Wifi ကို ခွဲသုံးနည်း, ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျုတာ Wifi ချိတ်နည်း
လူ ထောင် သောင် သိန်း သန်း မက...
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ အမေသာ
နံပါတ်တစ်လို ..... အချစ်ပိုနေကြတာ
အမှတ်တမှဲ့ ..... ကျက်သီးဖျန်းသွား
အခမ်းနားဆုံး... စာသားမျိုးနဲ့ 
တို့ မမြင်နိုင်တဲ့.. တစ်နေရာမှာ
ပင်ပန်းလှစွာ.... ရုန်းကန်လို့ လှုပ်ရှား
အလုပ်များနဲ့ ... မအားနိုင်တဲ့...အဖေ။
အံကြိတ်ကာခံစား အပယ်ခံလူသားအဖြစ်နဲ့ လေ....
အမေချက်လို့ ပြုတ်တဲ့ ထမင်းတစ်လုတ်ကို
မြိန်ရှက်စွာ.............. ငါတို့ စားရ
သွေးတစ်စက်ဟာ.......... တို့ ဝမ်းစာတွက်...!
တို့ ပညာတွက်............! အားလုံးအရေးတွက်...!
ထွက်ကျလို့ ပေးတဲ့....... နှလုံးသွေးဆိုတာ
အမေပေးတဲ့ ထီးနဲ့ ဖိနပ် အပူမဟတ်အောင်ကာကွယ်
သားသားနားနားနဲ့ ပေါ့.... အမေ့နားမှာကပ်လို့ ဖား
"တအား ချစ်တယ် အမေရယ်"လို့ပြောဖူးကြတယ်မလား??//
ဒီပစ္စည်းတွေ............. တို့ သုံးနိုင်ဖို့ 
နေပူခံလို့ အလုပ်ကိုလုပ် စုတ်ပြတ်တဲ့အင်္ကျီသား
ပြတ်တော့မဲ့.............. ဖိနပ်ပါးနဲ့ 
ဒီကဗျာကို.......... ဆက်ရေးဖို့ စဉ်းစား
ကိုင်ထားတဲ့ မှင်ဖျားတွေ တုန်နေပီအဖေ......။
"အမေ" အသက်ပေးလို့ .. မီးဖွားချိန်မှာ
"အဖေ" ဟာတို့ မမြင်ကွယ်ရာမှာ
အဲဒီငွေထုပ်... ဘာလုပ်ဖို့ ဆိုတာ
အရက်ကိုသာအဖော်ပြု ရင်ကိုထုလို့ မျက်စေ့မှိတ်
အံကြိတ်လို့ မြိုသိပ်..... တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ ခုန်နေရတဲ့
အဖေတချို့ ရဲ့......... ရင်ခုန်သံမျှော်လင့်ခြင်းမဲ့
အဖေဖြစ်မဲ့........ ယောက်ျားကောင်းတို့ ရယ်
"အရက်သမားဆိုတဲ့ ဓားအသွားနဲ့ "
"သမီး/သားရဲ့ ...... ရင်အ၀အား"
"မထိုးမိကြပါစေနဲ့အို....ယောက်ျား"။
အသောက်အစားကိုခင်တွယ် လူပုံအလယ်မှာနာမည်ဆိုးနဲ့ 
"ဘီလူး" အကနဲ့ ........ အဖေ့ဇာတ်တော်ကြီးဟာ
ခုအခါမှာအသက်ဝင်လာတာမို့တွေးလေလေ....
ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ အဖေ.......။
အပြစ်ရှိလျှက်........ ဆုံးမ မသင်
ငါ့သမီး/သားက.... လိမ္မာပီးသားလို့ ဆို
အားရပါးရ.......... နမ်းရှုံ့ ချင်ပါတယ်အဖေ။
အမဲစက်မပါဖို့ ...... လူကြမ်းလုပ်လို့ 
ပြုံးချိုမျက်နှာထား ကဲ့ရဲ့စကားနဲ့ 
အချွန်နဲ့ "မ"တတ်ကြတဲ့ လူလောကအလယ်မှာ
ကျင်လယ်စွာကြိုးစား.... ပြတ်သားတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ 
ကျရောက်မဲ့အန္တရာယ် ကာကွယ်ဖို့ ကြိုတင်တွေး
အသက်ပေးဖို့ ......... ၀န်မလေးတဲ့...တို့ ရဲ့အဖေ။
အရက်သောက်ဖို့ ဆိုတာ ဝေလာဝေး....
မိသားစုအရေး.......... ကြိုလို့ တွေးထား
လူမှု့ ဘာသာရေးကို ရှေ့ တန်းမှာတင်
လှူတန်းဖို့ လက်မနှေးခဲ့ ပညာရေးတွက်သင်ကြားလို့ ပေး
အပြုံးလေးနဲ့ ဆုံးမတတ် စကားခတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ ဖြေ.....
ချစ်လှစွာသောအဖေ...... အသက်ရှည်လို့ ကျန်းမာပါစေ။
ဘ၀ကြမ်းနဲ့ ......... ခရီးလမ်းကို
အတောင်ပံကျိုးတဲ့ငှက် လေအဟုန်ကိုပြန်တက်ဖို့ ဆိုတာ
သတ္တိရှိရှိ ပျံသန်းရဲတာ စုံလင်ခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးပါ။
အမိအဖမရှိကြလည်း စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကြိုးစား
ရေတစ်ခွက်အား....... ပြုံးချိုတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ 
ကမ်းနိုင်သောသား/ သမီးများ ဖြစ်ကြပါစေသား....။
Author Anonymous at 1:45:00 PM0မှတ်ချက်
မိုးယံ လူရွှင်တော်ဖလား ပထမ ၊ ဒုတိယ ၊ တတိယ နဲ့ ဖိုက်စတားဟာသ
Author မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) at 3:42:00 AM0မှတ်ချက်